Gam akporo Wear 2.0 ozi ọma | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ bụ isi nke anyị ga-ahụ na gam akporo Wear 2.0
Villamandos | | android, Ngwaọrụ yi
Naanị ụnyaahụ Google na eze mara ọkwa mbata na ahịa nke 2.0 Weebụ Weebụ, sistemụ nke abụọ nke sistemụ arụmọrụ ya, ọkachasị onye nrụpụta maka ngwaọrụ weara, n'etiti nke, na-enweghị mgbagha, smartwatches pụtara. Ke ibuotikọ emi anyị na-ama na-egosi gị zuru ndepụta nke smart ese ga-enweta software update mara ọkwa ụnyaahụ site search ibu.
Dabere na David Singleton, osote onye isi oche nke Android Wear, nke a abụghị naanị mmelite ọ bụla, kama ọ bụ nke kachasị ukwuu nke emere n'oge. Maka ihe a niile anyị kpebiri ịgwa gị n'isiokwu a isi ozi ọma na anyị ga-ahụ na gam akporo Wear 2.0.
1 Ntụziaka Google
2 Nhazi na mfe
3 Ohere ohuru n'iji ngwa
4 .Ma ọkwa
5 android Ṅaa
Ọbịbịa ahụ adịwo anya ma n'ikpeazụ Onye maara ihe nke Google ruru nkwojiaka anyị. Site na imetụ otu bọtịnụ dị na nche aka ma ọ bụ iji iwu olu "OK Google" Onye enyemaka ga-adị njikere inye anyị ozi anyị rịọrọ.
Mara ihu igwe taa ma ọ bụ ihe ọ ga-abụ echi, nyochaa ndepụta nke ọrụ ma ọ bụ mee ndoputa na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ bụ ụfọdụ nhọrọ ndị onye enyemaka nwere ọgụgụ isi nke onye na-eme nchọpụta ga-enye anyị.
Ọ bụghị ihe ọhụụ na anyị amaghị mana ejiri gam akporo Wear 2.0 Ntụziaka Google Ọ bịaruola nkwojiaka anyị, iji mee ka anyị pụọ n'ọtụtụ nsogbu na karịa ime ka ndụ dịtụ mfe. N'oge a buru n'uche na ọ dị naanị na Bekee na German, ọ bụ ezie na Google ekwenyela na na mmelite n'ọdịnihu ọ ga-amalite ịdị na asụsụ ndị ọzọ. Enwere olile anya na Spanish dị n’etiti ha na ọ ga-adịghị anya n’oge na-adịghị anya.
Nhazi na mfe
Otu n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile bụ ndị ọrụ nke smartwatch na Android Wear agbaghara kachasị bụ obere ozi anyị nwere ike ịhụ mgbe ụfọdụ na ihuenyo. Google chekwara obere ozi anyị nwere ike ịhụ yana gam akporo Wear 2.0 nke a ga-agbanwe ọtụtụ.
Site ugbu a gaa n’ihu, anyị nwere ike ịhazigharị ihu elekere ka o gosi ozi ndị ọzọ anyị họọrọ. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịhazi ogwe dị iche iche, yana nnukwu ozi, site na nke ị nwere ike ịmegharị site na ịpị mkpịsị aka gị n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ogwe ozi dabere na ebe ị nọ ma ọ dịghị mkpa ka ịnwe otu data ahụ n'aka ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọfịs dị ka ị nọ na mgbatị ahụ.
N'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị na ngalaba a na e meela ka usoro dị n’etiti ngwa na ọrụ dị mfe nke mere na ọ ga-adị mfe na ọsịsọ karịa tupu ịnweta ụfọdụ ogwe.
Ohere ohuru n'iji ngwa
Na mbata nke gam akporo Wear 2.0 ọ bụghị naanị na sistemụ arụmọrụ ka mma, mana ọtụtụ ngwa ewepụtala mmelite na arụmọrụ ọhụrụ, nke n'ezie na-emetụta anyị niile bụ ndị ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ Google Fit, arụnyere nwa afọ na ọtụtụ smartwatches, ọ na - enye gị ohere ịlele anya, calorie ọkụ ma ọ bụ obi obi, yana ma ị na-eje ije, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè, ihe nke ọtụtụ nwere ike ịba uru dị ukwuu.
Facebook Messenger, Glide, Google Messenger, Hangouts, Telegram na WhatsApp enwekwukwa nke ọma na ọ bụ naanị site na imetụ ọkwa nke ozi ị nwere ike ịzaghachi, na-ekwupụta ozi gị ma ọ bụ kwupụta azịza gị.
Ọzọkwa ugbu a anyị nwere ike ibudata ngwa ozugbo na Google Play nke agbakwunyere na ngwaọrụ n'onwe ya, ma kpochapụ ya na menu ndị niile anyị anaghị eji.
Site na mbata nke gam akporo Wear 2.0, ọkwa ewe gbanwere ọtụtụ. Kama kaadị ọcha ndị pụtara na ala nke ihuenyo ahụ, nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye masịrị, ugbu a, anyị ga-ahụ ọkwa ahụ n'ụzọ dị mfe ma karịa n'ụzọ niile bara uru.
Dabere na ngwa nke anyị si enweta ọkwa ahụ, anyị ga-ahụ ya n'otu agba ma ọ bụ ọzọ. Na mgbakwunye, ha ga-apụta naanị mgbe ị wetara nkwojiaka n'anya gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọkwa niile ọnụ enweghị nsogbu ebe ọ bụ na ọ ga-ezuru gị swipe isi ihuenyo iji hụ ha.
N'ikpeazụ na imechi ndepụta a nke isi ihe anyị nwere ike ịhụ ma nwee obi ụtọ na gam akporo Wear 2.0, anyị enweghị ike ichefu banyere mbata nke Android Pay na ụmụ bebi anyị. Sistemụ ịkwụ ụgwọ Google akwụgoro na smartwatches anyị ma ọ ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ site na iji igwe elekere anyị, ọ bụrụhaala na ngwaọrụ mkpanaka anyị nwere NFC.
N'oge a usoro ịkwụ ụgwọ a na-amalite inweta ndị na-eso ụzọ ya ma a ga-atụ anya na ugbu a ọ mere ọdịda ya na gam akporo Wear, ọnụọgụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ iji ngwaọrụ ha wearable ga-aga n'ihu na-eto eto na ezigbo ije. N'ezie, anyị nwere olile anya na ọ dị mfe, dị mma ma dịkwa ngwa iji, ebe ihe atọ ndị a ga-abụ isi maka ọdịnihu gị.
Ọzọ anyị na-egosi gị, iji kpochapụ obi abụọ ọ bụla, ndị ndepụta zuru ezu nke smartwatches na ha ga-enweta nkwalite gam akporo Wear 2.0 maka ụbọchị ndị nrụpụta dị iche iche ka ga-akọwapụta ha;
Nlekọta LG R
Michael nwere ohere
Moto 360 2nd Jen
Moto 360 maka ụmụ nwanyị
Ọhụrụ Balance RunIQ
TAG Heuer ejikọtara
Ka anyị cheta na LG Watch Style na LG Watch Sport gosipụtara na nso nso a nwere gam akporo Wear 2.0 arụnyere na mbụ, ma ugbu a, anyị ga-echere maka ọbịbịa nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ Google maka ngwaọrụ anyị iji nwee ike ịnwale ha ihe ohuru na oru ohuru, ma bido ime ya site na ya.
Kedu ihe ị chere gbasara mmepe ọhụrụ nke Google webatara na gam akporo Wear 2.0?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a. Gwa anyi ihe oru ohuru ma obu ihe ndi ichoro ichoro ichoro ichoro ichoro nke ohuru nke Android Wear.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ yi » Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ bụ isi nke anyị ga-ahụ na gam akporo Wear 2.0
Ma eleghị anya, n'ime ya na nsụgharị ọhụrụ bụ mmiri ara ehi, mana gbasara ọkwa ...
Ọbụlagodi na ị na-ele elekere anya, ọ bụrụhaala na ị naghị emetụ ya "elu", ọ gaghị ekwe omume ịmara ma ị nwere ọkwa ọ bụla. Ihe ya bụ na ọ nọrọ ebe ahụ, ka anyị wee nwee ike ịhụ ya ngwa ngwa.
Ma oburu na obu whatsapp ... chefuo na "na pliqui" anyi nwere ike iza ya. Echiche ònye ka ọ bụ itinye ihe ọhụrụ natara n'elu mkparịta ụka ahụ?
Hapụ ya, n'echiche ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ ozugbo n'elu, ị na-adịghị mkpa na-aga crazy emefu tooooall na conver.
Na ịza ya ... adịghị mfe ma ọlị. Tupu gị "agbata obi" na ihuenyo na-aza. Ugbu a, ị ga-eleba anya n'ime ntụgharị maka akara ngosi pịa ka ị nwee ike ịza.
Na mgbakwunye, tupu ị gwa iwu na mgbe obere oge gachara ... ezigara ozi ahụ n'onwe gị. Ugbu a ị ga-enwerịrị aka gị n'efu ma chere maka obere akara ngosi ịpụta iji metụ ma zipụ ozi ahụ.
Nke a bụ ara.
Tupu ... Ọbụna mgbe ị na-anya ụgbọ ala ị nwere ike ịza WhatsApp n'enweghị nsogbu. Ugbu a ọ ga-abụ ara ara ịnwale.
Ka anyị hụ ma ha melite version n'ihi na mgbe update, M na-atụ uche m ochie version
Ihuenyo nke LG G6 ọhụrụ leaks online
Ndị a bụ azụmahịa kachasị mma izu anyị nwere ike ịchọta na Amazon